နယ်စပ်များ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်သဖြင့် အနောက်ဩစတြေးလျပြည်နယ်ရှိ ဆေးရုံများအား “အနီရောင်သတိပေးချက်” ထုတ်ပြန်ထား - Xinhua News Agency
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့တွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေး သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန် ၁၉ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဆစ်ဒနီ၊ မတ် ၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
နယ်စပ်များ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ချိန်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု မြင့်တက်လာနိုင်ခြေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် မျှော်မှန်းလျက် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ အနောက်ဩစတြေးလျပြည်နယ် (WA) ရှိ အစိုးရဆေးရုံများအားလုံးကို “အနီရောင်သတိပေးချက်” အဆင့်သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
WA က မတ် ၃ ရက်၌ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးသော နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားဧည့်သည်များနှင့် နိုင်ငံအတွင်းသို့ ဆိုက်ရောက်လာပါက ရောဂါစစ်ဆေးမှု လိုအပ်ချက်များ လိုက်နာသူများအားလုံးအတွက် ၎င်း၏နယ်စပ်များအား ဖွင့်လှစ်ထားလျက်ရှိသည်။
ထို့ပြင် အဆိုပါ ပြည်နယ်တွင် မတ် ၂ ရက်က ရောဂါဖြစ်ပွားသူအသစ် ၁,၇၇၀ ဦး ရှိခဲ့ပြီး ဆေးရုံတွင် တက်ရောက်သူ ၁၆ ဦး ရှိကြောင်း၊ မတ် ၂ ရက်အထိ လက်ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားသူ စုစုပေါင်း ၆,၉၆၉ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။ WA ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် Mark McGowan ကလည်း ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသမှု မြင့်တက်မှု မကြာမီဖြစ်ရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း သတိပေးခဲ့သည်။
“ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာ အိုမီခရွန်ဖြစ်ပွားမှု အမြင့်ဆုံးက မကြာမီ ရက်သတ္တပတ်တွေအတွင်းမှာပဲ ရောက်ရှိလာမှာပါ” ဟု McGowan က ပြောကြားခဲ့သည်။
WA ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်အရ ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးအရာရှိချုပ် Andrew Robertson က “အနီရောင်အဆင့်” ဆေးရုံများအနေဖြင့် မြင့်တက်လာသော “ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကို စီမံခန့်ခွဲဖို့နဲ့ ဆေးရုံတွေအတွင်း သက်ရောက်မှုတွေကို ဖြစ်နိုင်သမျှ လျှော့ချဖို့” ဆောင်ရွက်မှုတွေ ထပ်မံလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဆောက်အအုံများအားလုံးကိုလည်း ဆေးရုံတက်ရောက်သော လူနာများအတွက် rapid antigen tests (RATs) နှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် တစ်ကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ (PPE) ၊ N95 များအား အသုံးပြုမှု တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မတ် ၁၄ ရက်မှစ၍ အဆင့် ၂ နှင့် ၃ ခွဲစိတ်ကုသမှုများအား အစိုးရဆေးရုံများ၌ လျှော့ချသွားကာ မတ် ၂၁ ရက်မှစ၍ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံအချို့တွင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
WA သည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ခရီးသွားဧည့်သည်များအား နယ်စပ်ဖွင့်လှစ်သည့် နောက်ဆုံးဒေသဖြစ်သည်။ McGowan အနေဖြင့် မူလက ဖေဖော်ဝါရီလတွင် နယ်စပ်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံအတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ အိုမီခရွန် မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့နေသဖြင့် အစီအစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Western Australia moves to “red alert” in hospitals as border reopens
2022-03-03 10:02:03 Category：Medicine, Health
SYDNEY, March3(Xinhua) — All public hospitals in the state of Western Australia (WA) move toa“red alert” phase as the state is expected to brace foraspike in COVID-19 cases when the border reopens.
On Thursday, WA opens its border to all interstate or international travellers with vaccination and testing requirements placed on arrivals.
Meanwhile, the state reported 1,770 new cases on Wednesday, with 16 people in hospital. To Wednesday, there isatotal of 6,969 active COVID-19 cases in the state. WA Premier Mark McGowan warnedasurge in hospitalizations is yet to come.
“In Australia, the peak of the Omicron outbreak is onlyafew weeks away,” McGowan said.
Inastatement published by the WA Health Department, the state’s Chief Health Officer Andrew Robertson said at “red level” hospitals would take further measures to “manage the increased risk of COVID-19 transmission and reduce impacts within hospitals as much as possible.”
All healthcare facilities will increase the use of rapid antigen tests (RATs) for patients attending hospital and Personal Protective Equipment (PPE), such as N95, for healthcare workers.
From March 14, category two and three elective surgeries will be reduced at public hospitals, with some private hospitals to start from March 21.
WA is the last jurisdiction in Australia to open its border to travellers. McGowan originally planned to reopen in February, but this was delayed due to the spread of the Omicron variant of COVID-19 within the nation. Enditem
Photo : A notice reminding people to protect themselves from the coronavirus is seen atafood booth amid the COVID-19 pandemic in Sydney, Australia, on June 19, 2020. (Xinhua/Bai Xuefei)
တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာအနှံ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ ၂ ဒသမ ၁ ဘီလီယံကျော် ထောက်ပံ့ပေးထားကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြောကြား